Homeसमाचार‘मेरी सोल्टीनी’मा पल र वर्षाको अभिनय (भिडियो हेर्नुहोस्)
November 28, 2020 admin समाचार 8936
गीतकार तथा संगी’तकार बाल कृष्ण न्यौपानेको नयाँ गीत मेरी सोल्टीनीको भिडि’यो सार्वज’निक गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्य’काको रमणीय स्थलमध्येको एक गोदा’वरीमा छायांकन गरिएको गीतको भिडियोमा नेपाल आइ’डलबाट लोकप्रियता कमा’एका किरण भुजेल र भ्वाइस अफ नेपालबाट लो’कप्रिय बन्न सफल गा’यिका गीता शर्माको स्वर रहेको छ ।
सार्वजनिक भि’डियोमा चर्चित नायक पल शाह र ना’यिका वर्षा राउतको अभिनय रहेको छ । फिल्मी शैलीको डान्सिगं गीतको भि’डियोमा प्रेम रोमान्समा देखिने रमाइ’ला पलहरुमा पल र वर्षाको अभि’नय लोभलाग्दो छ ।
पल र वर्षा एक रोमा’न्टिक प्रेमी जोडीको अवता’रमा देखा परेको गीतको भिडियो हेर्दा दर्श’कले आफ्नै प्रेम क’हानी जस्तो महशुस गर्नेछन् । जसका लागि निर्दे’शक गम्भिर विष्टले निकै मेहेनत गरेको गीतकार न्यौपाने बताउँछन् ।
गीतकारन्यौपा’नेका यसअघि ‘उजाडियो शिशिर’मा (विभिन्न शीर्षकमा पुरस्कृत गीत), ‘अब यि अल्छी हातमा’ (सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रगानमा पुरस्कृत), लगाय’तका दर्जन बढी गीतहरु बजा’रमा आइसकेका छन् ।
नबिन निरौला’को कलर र सम्पादन रहेको गीतको भि’डियोको छायांकन ज्ञानेन्द्र शर्माले गरेका हुन् । जसको नि’र्माण दुर्गा धिमाल ९न्यौपाने०ले गरेकी हुन् । पहिलो प्रेमको झ’ल्को दिने मेरी सोल्टीनीको भिडियो ब’जारमा ल्याएको बिके क्रियशनले माया प्रेममा आधा’रित हेरिरहुँ लाग्ने भिडियोहरु बजारमा ल्या’ईसकेको छ ।Osnepal बाट
उपत्यकामा यसरी हुने रहेछ गुण’स्तरहीन सेनिटाइजर उत्पादन, १० ट्रक सेनिटाइजर ब’रामद
May 23, 2021 admin समाचार 5739
काठमाडौ उपत्य’कामा नै गुणस्तरहीन सेनीटाइजर उत्पा’दन हुने गरेको खुलेको छ । प्रहरीले आइत’वार छापा मार्दा गुण’स्तरहीन सेनिटाइजर उत्पादन गरेको फेला परेको हो । महानगरीय अप’राध महाशाखाको टोलीले ललितपुरको इमाडो’लमा रहेको पर्सा नेपाल इन्डस्ट्रिज प्रालिमा छापा
March 7, 2021 admin समाचार 6430
November 21, 2020 admin समाचार 9381
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231277)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (229311)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228128)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227643)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195604)